कतारमा रहेका नेपालीको तलब कति बढ्दै छ ? हेर्नुहोस् – Dainik Samchar
कतारमा रहेका नेपालीको तलब कति बढ्दै छ ? हेर्नुहोस्
August 23, 2021 249
काठमाडौँ — कतारले आप्रवासी अदक्ष श्रमिकका लागि तोकेको न्यूनतम तलबलाई पुन हेरफेर गर्न राजी भएको समाचार आएको छ ।
प्रशासनिक विकास, श्रम तथा सामाजिक मामिला मन्त्रालयले खाना र बस्नेबाहेक श्रमिकको न्यूनतम तलब एक हजार रियाल (झण्डै ३० हजार रुपैयाँ) तोकेको थियो । यो घरेलु कामदारको हकमा समेत लागू हुनेछ । उक्त तलबलाई वृद्धि गर्ने कुरामा कतार सरकार सकारात्मक भएको भनिएको छ ।
अन्तरास्ट्रिय मिडिया अनुसार सबै कम्पनीले अनिवार्य रुपमा न्यूनतम तलबलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । खाडीका ६ देशमध्ये कतारले मात्रै न्यूनतम तलब तोकी कार्यान्वयनमा ल्याएको आएको छ । यो तलब कतारमा कार्यरत र नया भिसा लिई जाने सबैको हकमा लागू गरिने समेत बताएको छ ।
बिश्वकप फुटबल २०२२ कतारमा हुने भए संगै कतारले श्रमिकहरुको लागि नियममा परिवर्तन ल्याउदै श्रमिकको लागि उपयुक्त गन्तब्य बनाउदै आएको छ । कतारस्थित नेपाली दूतावासले सबै श्रमिकले कतार सरकारद्वारा तय गरिएको न्यूनतम तलब पूर्ण रुपमा पाउनेमा विश्वास गरेको जनाएको छ ।
यता नेपाल सरकारले बैदेशिक रोजगारिमा जानेहरुलाई मध्यनजर गर्दै कोरोनाको खोप दिन सुरु गरेको छ । हरेक जिल्लामा बिदेश जानेहरुका लागि खोप दिन थालिएको हो ।
Prevयी ५ राशी भएका मानिस हुन्छन् धेरै मेहनती, तपाई पनि पर्नुभयो की ?
Nextकाठमाडौंको सुन्धाराबाट भक्तपुर पुगेकी १५ बर्षीय किशोरीको बयान, नास्ता खाउँ भन्दै होटल भित्र लगेर…..
विवाह अगाडी नै गर्भवती भएको भन्दै दियाको आलोचना !
आमाले फ्यालेर हिँडिन् :बेवारीसे शिशुलाई महिला प्रहरीले गराईन स्तनपान, दुनियाँका आँखा रसायो !
बला त्का,र आरोपमा भाइरल अर्जुन प,क्रा उ
एम्बुलेन्स सञ्चालन भद्रगोल : निर्देशिका गज्जबको, कार्यान्वयन भेट्टाउनै गाह्रो ! (700)